Sifuna abantu abakhethiweyo be-2 ngentengiso kunye namava okuthengisa e-Australia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Le yindawo yethu yosapho ehlala eMelbourne!Phatha umdlalo ekude njengomdlalo wakho wasekhaya kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Town News Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba Sifuna abantu abakhethiweyo be-2 ngentengiso kunye namava okuthengisa e-Australia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Le yindawo yethu yosapho ehlala eMelbourne!Phatha umdlalo ekude njengomdlalo wakho wasekhaya kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Town News Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba
Ukujonga i-2 elites ngentengiso kunye namava okuthengisa
Imithombo yeendaba ye-Intanethi ye-Intanethi yase-China e-Melbourne, e-Australia isecaleni, ichwephesha kwaye ivulekile, inenjongo enkulu yokuthunywa kunye nendawo yophuhliso olungenamda.
Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba uhambe nathi kwaye sijonge phambili kulangazelelo lwakho, umdla, umdla, amabhongo omsebenzi, amava obuchwephesha afanelekileyo, kunye nokuzinikela okukhulu emsebenzini wakho. Yilinde:
Intengiso yentengiso 2
Amaqela anomdla nceda uthumele i-resume yakho ku [imeyile ikhuselwe] (Unokubonelela ngamathuba enkxaso-mali yokuthuthela e-Australia kubantu abafundela i-media majors okanye amashishini ahambelana noko)